Olee otú Tinye Music na iPhone si ọzọ Computer
> Resource> iPhone> Olee na-etinye Music na iPhone si ọzọ Computer
"Ọ dị onye maara otú tinye music na iPhone si dị iche iche kọmputa? M mkpa itinye music m iPhone 5 si ọzọ na kọmputa. Otú ọ dị, mgbe m na-eme nke ahụ, a ịdọ aka ná ntị bịara mkpu, sị ya ga-akwụsị data na m iPhone. biko nyere! "
N'ozuzu-ekwu okwu, gị iPhone bụ naanị kwesŽrŽ ka mmekọrịta na otu kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-agbalị tinye music gị iPhone si ọzọ kọmputa, a mmapụta uche-abịa si, ịdọ aka ná ntị gị na gị data on iPhone ga-ehichapu ya. Ọ bụrụ na ị pịa 'Ee', mgbe ahụ, ọhụrụ songs ga-synced gị iPhone. Ma n'otu oge, ị ga-atụfu niile songs, videos, nakwa akwụkwọ na gị iPhone.
Ọfọn, ọrụ gburugburu ka na-adị ịgbakwunye songs na iPhone si ọzọ kọmputa na-enweghị erasing mbụ faịlụ na iPhone. E wezụga iTunes, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa nyefee songs na iPhone si ọzọ na kọmputa. Ebe a, ga-amasị m ịme ka ị Wondershare TunesGo. Ọ bụ ọkachamara ngwá ọrụ na-enye gị ohere etinye music na gị iPhone si ọzọ kọmputa na-enweghị syncing. Ndị na-esonụ bụ 2 nzọụkwụ ịgbakwunye music na iPhone si ọzọ na kọmputa na Wondershare TunesGo.
Download Wondershare MobieGo maka iOS ikpe mbipute na-etinye music na ihe iPhone si ọzọ na kọmputa.
Cheta na: m na nke nyere ma Wondershare TunesGo (Windows) na TunesGo (Mac) ikpe mbipute ebe a. Ị nwere ike ịhọrọ nri onye dị ka gị na kọmputa sistemụ. Site n'ụzọ, TunesGo (Windows)-arụ ọrụ na PC na-agba ọsọ na Windows 8, Windows 7, Windows Vista, na Windows XP. MobileGo maka iOS (Mac) ugbu a na-akwado Mac na-agba ọsọ Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6.
Jiri gị iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na ẹkedori Wondershare TunesGo. Mgbe ejikọta ịga nke ọma, gị iPhone ga-egosipụta na isi window nke TunesGo ya isi Ama.
Nzọụkwụ 2. Tinye music gị iPhone si ọzọ kọmputa
Pịa 'Media' na n'aka ekpe nke isi window. Site ndabara, ọhụrụ window, mbụ taabụ bụ 'Music'. Na site na ebe a, gị niile iPhone songs na-egosipụta. N'elu, ị pụrụ ịhụ ihe 'Tinye'. Pịa triangle n'okpuru ya ma họrọ 'Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa'. Na popped elu window, họrọ songs na kọmputa gị na mbubata ha site na ịpị 'Open'. Ọ bụ ya.
Lee, ọ bụ nnọọ mfe ịgbakwunye music na iPhone si ọzọ na kọmputa. Ọ ga-ewe gị ole na ole sekọnd dabere na otú ọtụtụ songs na ị na-agbakwunye site na kọmputa gị iPhone. Na e nwere ọtụtụ ndị magburu onwe atụmatụ na TunesGo, nke ga-eme ka gị na mobile ndụ nnọọ mfe. Chọta ha site onwe gị ugbu a!
10 iPhone mmekọrịta Nsogbu on iOS 8